🥇 ▷ Sida loo qaabeeyo Windows 7 ✅
Sida loo qaabeeyo Windows 7
Windows 7 Waa mid ka mid ah noocyada ugu waxtarka badan, maadaama ay bixiso qaab dhaqso ah oo fudud oo loo istcimaali karo, kana duwan barnaamijyadii hore. Qodobkaan waxaan kuugu soo qaadaneynaa macluumaad ku saabsan sida Qaab Windows 7 hab fudud. Waxaad u baahan tahay inaad akhrido xogta aan kuu siineyno si aad ugu guuleysato. Waxaan ku bilaabeynaa waxyaabaha soo socda:
Waa maxay qaabaynta kumbuyuutarkaaga?
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in dhaqankan Waxay ka kooban tahay tirtirka faylasha la keydiyay si loola dagaallamo wax kasta oo waxyeelo u leh kombiyuutarkaaga, fayras ahaan, kiiskan. Sidoo kale, qaabeynta ayaa sidoo kale faa’iido leh maxaa yeelay waxay keenaysaa shaqeynta habboon ee qalabkaaga.
Maxaad samayn ka hor si aad u sameysatid Windows 7?
Kahor intaadan Windows 7 galin kooxdaada waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: riix SUPRE iyo DEL, u tag BIOS, ka dibna Boot Order, marka lagu daro CD iyo DVD. Markaa waxaad u baahan tahay inaad riixdo ESC iyo F10 si aad u bilowdo hawsha aan ugu dambeyntii uga wada hadli doonno maqaalkan.
Dhanka kale, xasuusnow intaadan bilaabin, waa inaad haysataa Windows 7, nuquladuna inay sax ahaato.
Ku rakib Windows 7 kumbuyuutarkaaga
Marka hore, waa inaad isticmaashaa CD ama DVD si aad u bilowdid. Qaabkaas, way furi doontaa Windows 7, sidaa darteed, waa inaad doorataa luqadda, iyo faahfaahin kale, ka dibna riix Ku xir imminka. Aqbal shuruudaha isticmaalka Windows 7. Marka xigta, waa inaad gujisaa Qaabka.
Qaabkaas waad ku qaban kartaa. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay in, ka hor, waa inaad doorataa ikhtiyaarka soo socda ee ku siinaya: Unugga C, maxaa yeelay tan ayaad ugu dambeyntii ku rakibi doontaa Windows 7 kooxdaada. Waxay sidoo kale kaa codsan doonaan inaad ku darto lambarka sirta ah ee loogu talagalay nabadgelyada dheeriga ah. Waa inaad sidoo kale dejiso aaga waqtiga, iyo kuwo kale. Oo diyaar.
Marka la soo koobo, qaabka Windows 7 waa shaqo xoogaa adag, laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn, sidaas darteed, haddii aad raacdo tilmaamaha aan ka wada hadalnay ee maqaalkan, wax dhib ah waad ku qaban kartaa. Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan howshan.